China Luna alu.isitulo sokutyela Uveliso kunye neFactory |Tailong
Isitulo sokutyela sangaphandle seLuna samkela uyilo lwetyhubhu ye-aluminium ejikelezayo, igxininisa iimpawu ezilula.Isitulo sokutyela siphuculwe amaxesha amaninzi ukuze uzive ugudile.Hlala inxalenye kunye nenxalenye yangasemva, idityaniswe ne-aluminium ebanzi, imveliso ye-ergonomic efanelekileyo, ukwenzela ukuba zikhululeke ngakumbi.
LONWABILE IXESHA LEHLOBO
Isitulo seLuna sidibanisa i-aluminium slat engqingqwa njenge-back and seat design, iphucula ngokupheleleyo ukuqina kunye nokusetyenziswa kwesitulo sokutyela.Kungakhathaliseki ukuba kwigadi yangaphandle, i-terrace, indawo yokutyela kunye nezinye iindawo, unokulonwabela ixesha elonwabileyo kunye nosapho kunye nabahlobo.
Uphuhliso lokubumba isinyithi oluchanekileyo oluchanekileyo kunye neteknoloji yokupolisha, yenza ukuba isakhiwo sokutyela sihlale sizinzile kwaye asishukumi, sinokuthwala malunga ne-300 kg.Ukuze kwandiswe indawo yokugcina, isitulo sokutyela saseLuna sithatha isakhiwo esiqingqiweyo, esifanelekileyo kwiindawo zokutyela kunye needili.
Tshatisa kunye ne-5cm ye-polyester yesihlalo sobukhulu be-cushion ukuze ufumane inkxaso eyongezelelweyo.Imiqamelo inokususwa kwimozulu eshushu ukubonisa ipateni yentambo ngaphantsi.Uyilo olunomtsalane olunjalo longeza inkcazo yobuhle kwipatio yakho.
Iseti yokutyela yeAluminiyam
* 5cm umqamelo
Luna Alu.Umboniso wesitulo sokutyela
Dublin alu, itafile uxande
Ngaphambili: Itafile yoxande yaseDublin (Alu. phezulu)
Okulandelayo: Isitulo sokutyela esilukiweyo sikaLuca (Indawo yokuphumla yeTeak)